Daawo:-Macalin Maxamuud Sheekh ” Waan ka tanaasulney go’aankeenii siyaasadeed” - Awdinle Online
Daawo:-Macalin Maxamuud Sheekh ” Waan ka tanaasulney go’aankeenii siyaasadeed”
February 29, 2020 (Awdinle Online) –Hugaamiyaha Guud Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa ku dhawaaqay in uu guud ahaan ka tanaasulay Siyaasadda maamulka Galmudug.
Waxaa uu sheegay in aysan aqbali doonin in dad Shacab ah ay ku dhintaan dagaallo markale ka dhaca Magaalooyinka Galmudug ee Ahlusunna gacanta ku heysay.
Waxaa uu sheegay in Ciidankii iyo hubkii ay ku wareejiyeen Taliyaha Guud 15-aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
” Waxaan ka tanaasulney go’aankeenii siyaasadeed ee Hugaaminta Galmudug , inagu diyaar uma nihin in markale dhiig daato ama bulshadu iska hor imaato , waxaan u taanaganahay doorkeenii diimeed iyo caqiiqada Ahlusunna Waljamaaca oo aan usii taagnaan doono ” ayuu yiri Hoggaamiyaha Ahlusunna.
Ciidanka Milatariga Soomaaliya gaar ahaan Guutadda 15-aad oo u badan Ciidankii Ahlusunna ee la qarameeyay ayaa la wareegay Ammaanka Madaxda ugu sareysa Ahlusunna ee kala ah Macalin Maxamuud, Sheekh Shaakir , Ashcari iyo Saadaq Sheekh Yuusuf Direed.
Hugaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud
Hoggaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud " waxaan ka tanaasulney go'aankeenii siyaasadeed ee Hugaaminta Galmudug"
Posted by SomNews Tv on Saturday, February 29, 2020
Previous articleSomalia Warns Kenya before UNSC to Cease & Desist All ‘Blatant Breaches of Somalia’s Sovereignty’
Next articleKooxo hubaysan oo dil ka gaystay Muqdisho